Ukuphucula ukuziphatha kwabafundi kunye neeKontrakthi zokuziphatha
Ootitshala Ukubandakanya Abafundi
Iindlela zokuziphatha eziManyanisiweyo zokuNcedisa ukuziphatha okuhle
Iikhontrakthi ezicacileyo zingancedisa abafundi ukuba baphucule ingxaki yokuziphatha
Kutheni Izivumelwano Zendlela Yokuziphatha?
Izivumelwano zendlela yokuziphatha ezichaza imiphumo efanele yokuziphatha ngokutsha kunye nemivuzo inokunceda ngokwenene abafundi baphumelele, banqume ukuziphatha kweengxaki kunye nokwakha ubudlelwane obuhle nabafundisi bezakhono. Iikhontrakthi zinokuphelisa imfazwe engapheliyo ye-wits eqalayo xa umfundi eqhuba utitshala kwaye utitshala uthatha isondo. Izivumelwano zingagxininisa umfundi kunye notitshala ngokuziphatha kakuhle kunokuba kubekho kwiingxaki.
Inkontileka yokuziphatha inokungenelela okulungileyo ukuze ugweme imfuneko yokubhala iSicwangciso soNxibelelwano loKhuseleko . Ukuba ukuziphatha komntwana kufaneleka isheke kwiCandelo elijongene neCandelo le-IEP, umthetho wesigqeba ufuna ukuba uhlalutye uhlalutyo lokuziphatha kwaye ubhale iSicwangciso soLungiso lokuPhatha. Ukuba enye ingenelelo inokuthintela ukuziphatha ekuphumeni kolawulo, unokuphepha umsebenzi omningi kwakunye nokuba ufuna ukubiza umnxeba we-IEP.
Isivumelwano sokuziphatha sivumelwano phakathi komfundi, umzali kunye notitshala. Ichaza ukuziphatha okulindelekileyo, ukuziphatha okungamkelekanga, iinzuzo (okanye umvuzo) wokuphucula ukuziphatha kunye nesiphumo sokungaphumeleli ukuphucula ukuziphatha. Esi sivumelwano kufuneka senziwe kunye nomzali kunye nomntwana kwaye sisebenza kakuhle xa umzali eqinisa ukuziphatha okufanelekileyo, kunokuba utitshala.
Ukuziphendulela kuyincandelo ebalulekileyo yempumelelo yesivumelwano sokuziphatha. Amacandelo:
Abathathi-nxaxheba: Umzali, uMfundisi kunye noMfundi. Ukuba bobabili abazali bathatha inxaxheba kwinkomfa, banamandla amakhulu kubo! Kubonakala ngokucacileyo ukuba baya kukuxhasa umgudu wakho. Ukuba unesikolo esiphakathi kunye nabanye ootitshala ngaphandle kootitshala abazodwa baya kuqhuba isicwangciso, kufuneka bonke basayine isivumelwano. Ekugqibeleni, umfundi kufuneka axoxwe, ngokukodwa malunga nembuyekezo. Yintoni umvuzo ofanelekileyo wokuqinisekisa ukuba banokuphucula ukuziphatha kwabo besikolo?
Indlela yokuziphatha: Ukuchaza indlela yokuziphatha kakubi (ukuyeka ukubetha, ukuyeka ukuthetha ngaphandle, ukuyeka ukufunga) kuya kugxininisa ekuziphatheni ofuna ukucima. Kufuneka uqiniseke ukuba uchaza indlela yokubuyisela indawo, ukuziphatha ofuna ukuyijonga kwindawo yayo. Ufuna ukuvuza umfundi ngokuziphatha ofuna ukukubona, kunokugweba indlela ongafuni ukuyibona. Uphando luye lwabonisa ngokucacileyo ukuba isijeziso asisebenzi: senza ukuba ukuziphatha kupheleke okwethutyana, kodwa umzuzu wokuba i-punisher ishiya, ukuziphatha kuya kuvela. Kubalulekile ukuba ukuziphatha okutshintshileyo kunomsebenzi ofanayo kunye nokuziphatha okukuyo ukuphelisa. Ukuphakamisa isandla sakho akuyithathi indawo yokubiza ukuba umsebenzi wokubizela ukufumana ingqalelo kwiontanga. Kufuneka ufumane ukuziphatha okuya kunika ingqwalasela efanele.
Iqoqo leenkcukacha: Uza kubhala njani xa ukufunwa okanye ukungafuneki kuyenzeka? Unokuba nomfundi wokujonga iliso, okanye nokuba uluhlu lokukhangela utitshala okanye iphepha lokurekhoda titshala. Ngokuqhelekileyo kunokuthi kube lula njengemithathu ngekhadi lesibini leekhiphethi elibhalwa kwidesksi, apho utitshala angafaka inkwenkwezi okanye isheke malunga nokuziphatha okufanelekileyo.
Umvuzo: Kufuneka uqiniseke ukuba ubeka umvuzo nombundu wokufumana umvuzo. Ziziphi iimpawu ezingalunganga ezivunyelwe kwaye umfundi unokukwazi ukufumana umvuzo? Umfundi ufuna ukubonisa ukuziphatha ngaphambi kokuba umfundi athole umvuzo? Kuthekani ukuba umfundi obuyela emva? Ingaba usenako ukufumana ityala ngenxa yempumelelo eyandulele?
Iziphumo: Ukuba ukuziphatha ojolise kuyo kuyinkathazo kwaye kunokunqanda impumelelo kungekuphela komfundi umbuzo, kodwa kwiklasi yonke, kufuneka ibe nemiphumo. Iimiphumo zifuna ukukhaba xa umbhobho othile udibene. Kwiimeko ezininzi, impumelelo yokubonisa indlela yokubuyisela indawo, kunye neendumiso kunye nokugxininiswa okumele kuhambisane nempumelelo, akufuneki ukuba imiswe. Sekunjalo, ukuba ukuziphatha kukuphazamisa igumbi lokufundela kwaye kubeka abanye abantwana engozini, umphumo kufuneka ube ngowokubuyisela uxolo kwiklasini aze enze abanye abantwana baphephe. Kusenokuba ukususa umntwana ekamelweni, okanye ukuhambisa umntwana "kwikona elithulileyo."
IziTyikityi: Yenza wonke umqondiso. Yenza into eninzi malunga nayo, kwaye qi ni sekise ukuba ugcina ikopi yesivumelwano, ukuze ufunde kuyo xa ufuna ukukhuthaza okanye ukuhambisa umfundi.
Ukumisela iKontrakthi yakho
Qinisekisa ukuba yonke into ikhona ngaphambi kokuba uqale isivumelwano. Abazali baya kwaziswa njani kwaye kaninzi kangakanani? Yemihla ngemihla? Ngeveki? Abazali bayaziswa njani ngemini embi? Uyakwazi njani ngokuqinisekileyo ukuba ingxelo ibonwe? Yintoni umphumo xa ifomu lokunika ingxelo ingabuyiselwa? Ifowuni kuMama?
Ukubhiyozela Impumelelo! Qinisekisa ukuba umfundi azi ukuba uyavuya xa bephumelele kwisivumelwano sabo. Ndiyifumanisa ukuba ngokuqhelekileyo iintsuku ezimbalwa zokuqala ziphumelela, kwaye ngokuqhelekileyo kuthatha iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba kukho "ukubuyela emuva." Impumelelo idla impumelelo. Ngoko qiniseka ukuba umfundi wakho ujabule xa ephumelela.
Izicwangciso zeSifundo se-Eid al Adha, iSidlo yamaSilamsi
Ukuchonga ukulahleka kweelwimi kunye nokuphazamiseka
Indlela yokuyilungisa ngaphandle kokuxinezeleka, ukuhlawulwa okanye imivuzo
Izixhobo zokusebenza zokuHlola
Iindlela ezimbini zeSikhs ezineenwele ezimfutshane zingenza i-Bun phantsi kweTurban
Iifayili zesiFrentshi kunye noMdluli
Indlela yokudibanisa "Ukuphelisa" (Ukugqiba)
Iimam eziphambili zeMork Mosque eMakkah
U-Emory no-Henry College Admissions
I-Gown Stick Grip - Yenza okufanelekileyo
Usuku loSuku lweNgcaciso: Ichanekileyo okanye i-Amiss?
I-Best Electric Chainsaws
Izidingo zeMigangatho yeeTherapists
Imbali kaWolfgang Amadeus Mozart
Indlela yokusebenzisa iAphulelo ngokufanelekileyo kwi-Chinese Chinese
Invention ye Mirror
Ukuba ngumKristu kwiCampus yeCandelo